हाेसियार ! दिमाग कमजोर बनाउने यस्ता गलत बानी त छैन तपाइकाे ? - ज्ञानविज्ञान
व्यक्तिको उमेर बढ्दै गएसँगै स्मरण शक्तिमा कमी आउनुलाई सामान्य रुपमा लिएपनि युवा अवस्थामा आउने यस्तो समस्याको पछाडी गम्भिर रोग भएको चिकित्सकहरुको भनाइ रहेको छ । यस्तो समस्या देखिनु भनेको दैनिक जीवनयापन हो । सामान्य लाग्ने बानी व्यवहारकै कारण मस्तिष्कलाई नराम्रो असर परेको हुन्छ ।
यस्तो समस्याले गर्दा व्यक्तिले दैनिक जिवनमा धेरै समस्याहरु झेल्नु परेको हुन्छ । दिनदिनै बढ्दै गएको यस्तो समस्यालाई बेवास्ता गर्दा भविष्यमा दिमागमा नराम्रो असर पर्ने अनुसन्धानबाट देखिएको छ । त्यसकारण आज हामी तपाईहरुले गरिरहेको केही बानीको कारण दिमागमा परेको पत्यक्ष असरको बारेमा बताउन गइरहेका छौँ ।
आफ्नो व्यस्ततालाई ख्याल नगरेर समयमा खानपान नगर्दा मानिसको स्वास्थ्यमा मात्र हैन् दिमागमा समेत असर पर्छ । बिहानदेखि बेलुका सम्म खाने खाना स्वस्थ हुन जरुरी छ । खाली पेट बस्दा दिमागले काम गर्न सक्दैन् । धेरै खाना खाँदा दिमागमा उल्झन पैदा हुन्छ । जसले दिनभर राम्रोसँग काम गर्न सकिदैन् ।
धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुन्छ । धुम्रपानको सेवनले आयुलाई छोट्याउने मात्र हैन दिमागलाई पनि छोट्याएर कमजोर बनाउँछ । त्यसकारण धुम्रपान सेवनले स्मरण शक्तिमा ह्रास ल्याउँछ ।
समयको परिवर्तन सँगै मानिसको जीवनशैलीमा पनि परिवर्तन आएको छ । राती लामो समय नसुत्ने, कम्युटर ल्यापटमा व्यस्त हुने जस्ता कुराहरुले दिमागलाई असर पार्छ ।
४.पानी कम पिउँदा
पानी कम पिउने मानिसको दिमागमा तेज कम हुन्छ । पानी पिउने मानिस र तिर्खाको मानिसमा १४ प्रतिशत तेज हुन्छ । यदि कुनै परिक्षामा सामेल हुनुछ । टाढाको यात्रा गर्नु छ भने दिमागलाई तेज राख्न पानी साथमा बोक्नुपर्छ । जसले कुनैपनि महत्वपूर्ण कुरा बिर्सनबाट जोगाउँछ ।
अल्छी मानिसको दिमाग कम रचनात्मक हुन्छ । अल्छी गर्ने मानिसले दिमागलाई प्रयोग गर्दैनन् । धेरै दिमागी काम गर्नुहुन्छ । रचनात्मक सिर्जनशिल रहेको छ भने दिमागलाई शक्ति मिल्छ र राम्रोसँग काम गर्न सकिन्छ ।
याद गर्नुहोस् तनाव पुरै शरिरको शत्रु हो । त्यसकारण तनावबाट मुक्त भएर बस्न जरुरी छ । मृगौलाले तनाव ग्रन्थी उत्पन्न गर्ने भएकाले यसले दिमागलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ ।
लामो समय कानमा ईयरफोन र हेडसेट प्रयोग गर्नाले कानसँगै ब्रेनलाई पनि नकारात्मक असर पर्छ । धेरै बेरसम्म इयरफोनको प्रयोग गर्दा ब्रेन टिशुजको नोक्सान हुन्छ । यसले अल्जाइमरको समस्या पैदा गर्छ ।
स्वस्थ व्यक्तिले हरेक दिन ७ देखि ८ घण्टासम्म सुत्न जरुरी हुन्छ । यसो गर्नाले शरिरलाई मात्र हैन दिमागलाई पनि स्वस्थ राख्छ । ख्याल गर्नुभएको छ निन्द्रा नपुगेको दिन दिमागले पनि राम्रो काम गर्दैन् ।
केही मानिसको बानी भिडभाडमा बस्न नरुचाउने एक्लै बस्ने हुन्छ । लामो समयसम्म एक्लै बस्ने बानीले दिमागलाई असर गर्ने भएकाले साथीसँगीसँग बस्नु राम्रो हुने एक अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ ।
Up Next के गर्ने बालबालिकालाई स्वस्थ बनाउन ? जानिराखाैँ